Latest Myanmar News - Page 277 of 293 - News & Media
မေလ(၁)ရက်မှ (၁၅)ရက်အထိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု (၇၅)ယူနစ်အထိ (အခမဲ့)ကို ထပ်မံပေးသွားမည်
May 6, 2020 by Latest Myanmar News
မေလ(၁)ရက်မှ (၁၅)ရက်အထိ ကာလအတွင်း အိမ်သုံးအမျိုးအစား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု (၇၅)ယူနစ်အထိကို ငွေကြေးကောက်ခံမှုကင်းလွတ်ခွင့်(အခမဲ့)ကို ထပ်မံပေးသွားမည်ဟု လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနမှ သိရပါသည်။ အိမ်သုံးမဟုတ်သော အစိုးရအဖွဲအစည်းများ ပြည်တွင်းလူမှုရေးအဖွဲှ့စည်းများ မှအပ ကျန်သုံးစွဲသူအားလုံး ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမည်တော့မဟုတ်ပေ။ Myanmar Digital News Unicode မလေ(၁)ရကျမှ (၁၅)ရကျအထိ ကာလအတှငျး အိမျသုံးအမြိုးအစား လြှပျစဈဓာတျအားသုံးစှဲမှု (၇၅)ယူနဈအထိကို ငှကွေေးကောကျခံမှုကငျးလှတျခှငျ့(အခမဲ့)ကို ထပျမံပေးသှားမညျဟု လြှပျစဈဝနျကွီးဌာနမှ သိရပါသညျ။ အိမျသုံးမဟုတျသော အစိုးရအဖှဲအစညျးမြား ပွညျတှငျးလူမှုရေးအဖှဲှ့စညျးမြား မှအပ ကနျြသုံးစှဲသူအားလုံး ကငျးလှတျခှငျ့ရရှိမညျတော့မဟုတျပေ။ Myanmar Digital News
အိမ်ထောင်ရေး၊အလုပ်၊ငွေကြေးကိစ္စ၊စီးပွားရေးများအဆင်ပြေစေရန် အိမ်ထောင်မိသားစုတစ်ခုတွင် စီးပွားရေး၊ ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စ အဆင်မပြေပါကလည်း စိတ်သောကဖြစ်စေရာ ကြုံတွေ့ရတက်သည်။ ယခုဖော်ပြပါ ယတြာသည် အိမ်ထောင်ရေးသာမက အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားရေးကိစ္စပါ အဆင်ပြေနိုင်သောယတြာဖြစ်ပါသည်။ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် မေတ္တာစေတနာအပြည့်ထားပြီး ဆရာမင်းသုခကိုယ်တိုင်ရေးသားတွက်ချက်၍ ထိရောက်သော ယတြာကောင်း တစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါပြီ်။ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ မိမိမွေးနေ့ နံနက် ၉နာရီ ၄၅မိနစ်မှာ အုန်းညွန့် (6)ညွန့်၊ ရွက်လှ (၁၇)ညွန့်၊ မေမြို့ပန်း (၁၉)ပွင့် (သို့မဟုတ်) ပျဉ်းမ(၁၉)ရွက် ဘုရားတွင် ကပ်လှူပူဇော်ပြီး လိုရာဆုတောင်းလိုက်ပါ။ တနင်္လင်္ာသားသမီးများ မိမိမွေးနေ့ နံနက် ၉နာရီ ၁၅မိနစ်မှာ ကံ့ကော်(၁၅)ညွန့်၊ သပြေ(၂၁)ညွန့်၊ သင်္ဘောသီး(၁)လုံးအား အိမ်ဘုရားတွင် ကပ်လှူပူဇော်ပြီး လိုရာဆုတောင်းလိုက်ပါ။ အင်္ဂါသားသမီးများ မိမိမွေးနေ့ နံနက် ၉နာရီ ၂၀မိနစ်မှာ နှင်းဆီ(၁၀)ပွင့်၊ ဇီးညွန့် (သို့မဟုတ်) ဇော်စိမ်းညွန့် … Read more
မြားဆိပ်ပင် မြားဆိပ်ပင်များသည် အမြင်၏ပေ ၆ဝ မှ ၈ဝ ခန်၏အထိရှိသော အပင်ကြီးမျိုးဖြစ်၍ ပေ ၆ဝ ခန့်အတွင်း အကိုင်းအခက်အရွက် များမထွက်ဘဲ ဖြောင့်ဖြောင့် မတ်မတ် တက်သွားသော ပင်စည်ကြီး များရှိကြသည်၊ မြားဆိပ်ပင်သည် မိုရေးစီအီး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ ယင်း၏ ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ အန်တီအေးရစ် တော့ဆီကေးရီးယား ဖြစ်သည်။ မြားဆိပ်ပင်၏ မူလပေါက်ရာဒေသည် အရှေ့အိန္ဒိယ ကျွန်းစုများတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သော ဂျားဗားကျွန်းဖြစ်သည်။ နောင်အခါမှ အထက်အောက် မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ကုန်းသစ်တော များ၌ အနည်းအကျဉ်းပေါက်ရောက်ကြသည်။ မြားဆိပ်ပင်သည် ယင်း၏ အခေါက်မှ ထွက်သော အဆိပ်စေးများကြောင့် လူသိများ၍ ထင်ရှားကျော်ကြားသည်။ အခေါက် သည် ဖြူတူတူ အရောင်ရှိ၍ တစ်လက်မခန့် ထူသည်။ အခေါက်ကို အနည်းငယ် ထွင်းဖောက်လိုက်သည့်အခါ … Read more
ဘဲဥ ဆားရည်စိမ် အိမ်မှာလုပ်တဲ့နည်းလေးပါ
အိမ်က ဆားဘဲဥ ဆားရည်စိမ်နည်း 1. ဘဲဥ 100လုံး ရေဆေးသန့်စင်ထားပါ။ သိုိ့မဟုတ် ကြက်ဥ ကြိုက်နှစ်သက်ရာဥ 2.ဆားကြမ်း 50သား 3.ဥ100ဆန့်မည့် ဥစိမ်ရန် ကော်ဗူး/စင့်အိုး သန့်သန့် 4.ဆားရည်ကျိုရန် အိုးသန့်သန့် ဆီမပါရ အိုးထဲရေသန့်ထည့် ဆားထည့် ပွတ်နေအောင်ဆူပြီးရင် အအေးခံထား။ (ရေက ဥ100ကို စိမ်ထားနိုင်ယုံသာ. 4-5 လီတာလောက်၊ ရေးများသွားရင် ဥထဲဆားဝင်နှေးလို့ ရက်ကြာမယ်။ချင့်ချိန်ထည့်ပါ) 5. ရေအေးသွားရင် ဆားဘဲဥဖောက်မည့် ဗူး/အိုးထဲလောင်းထည့်ပါ ပြီးရင် သန့်စင်ထားသောဘဲဥကို တစ်လုံးချင်းစီ ဖြေးဖြေးထည့်ပါ။ ဥတွေအားလုံးဆားရည်ထဲ စိမ်နေရပါမယ်။ ဥတွေအထက် ဆားရည် 2လက်မလောက်ပိုထည့်ထားပါ။ 6. ထားမည့်နေရာ နေမပူရ။ ထားပြီးရင် အတတ်နိုင်ဆုံး 10ရက်လောက် သွားမထိပါနဲ့။ 7. အချိန် 2ပတ်လောက်ဆိုရင် တခေါက်လောက် … Read more
ငါးဖယ်ရဲယိုရွက်ထုပ်လုပ်နည်း ရဲယိုရွက်အနုများကို ရေဆေးသန့််စင်ရေစစ်ထားပါ… ငါးဖယ်ကို နနွင်းမှုန့် ငံပြာရည် ဟင်းခတ်မှုန့် ကြက်သွန်ဖြူ ချင်း ညက်အောင် ထောင်းထည့်ပြီးနယ်ပါ ပြီးလျင်.. အပေါ်အောက်မြှောက်ရိုက်ပါ…စီးပိုင်လာလျင်…ရဲယိုရွက်ထဲအနေတော်ထည့်ပြီးပုံပါအတိုင်း ထုတ်ပါ.. ပြီးလျင်အိုးထဲစီထည့်ပြီး..ငံပြာရည်အနည်းငယ် နှမ်းဆီထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်း ဟင်းခတ်မှုန့် ကြက်သွန်ဖြူနီပါးပါးလှီးထည့်ပါ…ငါးဖယ်ထုတ်များ ရေမြုတ်အောင်ထည့်ပြီးတည်.. ကြက်သွန်ကျက် ပွက်ပွက်ဆူလျင် အပေါ့အငံလိုသလိုထည့်…ဆေးဖက်လည်းဝင် ခံတွင်းလည်းမြိန်…လုပ်စားကြည့်နော်..။ စားမြိန်ဖွယ်ရာ ပျို့လက်ရာ Unicode ငါးဖယျရဲယိုရှကျထုပျလုပျနညျး ရဲယိုရှကျအနုမြားကို ရဆေေးသနျ့စငျရစေဈထားပါ… ငါးဖယျကို နနှငျးမှုနျ့ ငံပွာရညျ ဟငျးခတျမှုနျ့ ကွကျသှနျဖွူ ခငျြး ညကျအောငျ ထောငျးထညျ့ပွီးနယျပါ ပွီးလငျြ.. အပျေါအောကျမွှောကျရိုကျပါ…စီးပိုငျလာလငျြ…ရဲယိုရှကျထဲအနတေျောထညျ့ပွီးပုံပါအတိုငျး ထုတျပါ.. ပွီးလငျြအိုးထဲစီထညျ့ပွီး..ငံပွာရညျအနညျးငယျ နှမျးဆီထမငျးစားဇှနျးတဈဇှနျး ဟငျးခတျမှုနျ့ ကွကျသှနျဖွူနီပါးပါးလှီးထညျ့ပါ…ငါးဖယျထုတျမြား ရမွေုတျအောငျထညျ့ပွီးတညျ.. ကွကျသှနျကကျြ ပှကျပှကျဆူလငျြ အပေါ့အငံလိုသလိုထညျ့…ဆေးဖကျလညျးဝငျ ခံတှငျးလညျးမွိနျ…လုပျစားကွညျ့နျော..။ စားမွိနျဖှယျရာ ပြို့လကျရာ
ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ ဒါလေးတွေစားပေးပါ
ပူပြင်းသော ရာသီဥတုတွင်စားသင့်သောအစားအစာများ လူသားတစ်ယောက်အတွက် ကိုယ်တွင်းအပူချိန်ဟာ ပျမ်းမျှ ၉၈ ဒဿမ ၆ ဒီဂရီဖြစ်ပြီး ရာသီဥတုပေါ် မူတည်၍ ၎င်းပမာဏထက် အပူချိန် အတက်၊အကျ အနည်းငယ် ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်အတွင်းအပူများတာကို ဆေးပညာလောကမှာ “Heat Stress” လို့ခေါ်ကြပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအပူချိန်က သူ့အလိုလို အေးသွားတာမျိုး မရှိတတ်ပါဘူး။ လိုအပ်တာထက် အပူချိန်များနေတဲ့အခါ ပိန်ချုံးလာခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း၊ လျှာ- နှုတ်ခမ်းတွေသာမက အရည်ပြားပေါ်မှာ အဖုအပိမ့်တွေ ထွက်လာခြင်း၊ ဝက်ခြံထွက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးဝေခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်းတို့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ကလီစာတွေကိုပါ ပျက်စီးစေနိုင်တယ်လို့ လေ့လာချက်အရ သိရပါတယ်။ ရေခဲရေများ၊ ရေနွေး၊စွပ်ပြုတ်စတဲ့ အရည်ပူပူများ၊ နေပူပူထဲ အချိန်အကြာကြီး သွားခြင်း၊ ငရုတ်သီး၊ ဂျင်း၊မျှစ်ချဉ်၊ငရုတ်ကောင်း၊ပတဲကောစတဲ့ ပူပူလောင်လောင် အစပ်တွေစားခြင်း၊ ရေသောက်နည်းခြင်းတို့က ကိုယ်တွင်း အပူရှိန် … Read more
လေဖြတ်လူနာများအတွက် သတင်းကောင်း။ လေဖြတ်လျှင် ကြေးသွင်းပါ။ လေဖြတ်လျှင် ကြေးသွင်းပါ။ လေဖြတ်ရောဂါကား ခေတ်စား၍ အဖြစ်များနေပါသည်။ အသက်(၄၀)ကျော် ကျား/မ များ အဖြစ်များနေပါသည်။ စာရေးသူ၏ ဇနီးက အသက်(၆၆)နှစ် ရှိပါပြီ။ ဝဖြိုး၍ ကျန်းမာရေး ကောင်းပါသည်။ သို့သော် ယခုနှစ်ပိုင်းတွင် နေပူသွားဖြင်း၊ လူအုပ်ထဲသွားခြင်းများ ပြုပါက ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းကိုက် ဖြစ်လာပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အိမ်နီးချင်းဆရာမထံသွား၍ သွေးချိန်ကြည့်ပါသည်။ (၁၇၀-၈၀)ခန့် ရှိနေတတ်ပါသည်။ “ဘာမှ မဖြစ်ပါ”ဟု ဂရုမစိုက်ခဲ့ပါ။ ၁၂-၁-၂၀၁၂ နေ့ ည(၉း၀၀)နာရီတွင် စာရေးသူမှာ ရင်ကျပ်နေသဖြင့် ဆေးရုံသွား၊ အောက်စီဂျင်ရှူရန် အကြောင်းပေါ်လာပါသည်။ (၈)မိုင်ဝေးသောတောင်တွင်းကြီး မြို့ဆေးရုံသို့ ကားကလေးဖြင့် အမြန်သွားရခြင်းပါ။ အလွန်အေးချမ်းသော ညဖြစ်ပါသည်။ ဇနီးသည်တွင် အပေါ်အနွေးထည် အကျီ်မပါပါ။ ကားမောင်းအသွားလမ်းတစ်ဝက်မှာ ရင်ကျပ်သူက … Read more
ကြက်ဥတစ်ခွံ၊ ငှက်ပျောခွံ တစ်ခုဖြင့် တစ်ရာသီစာ အပင်အားဆေးမှုန့် အလွယ်လုပ်မယ်
အပင်မျိုးမျိုးအတွက် လိုိအပ်တဲ့ သဘာဝ မြေသြဇာမှုန့် အလွယ်တစ်ကူ ပြုလုပ်နည်း ကယ်လ်ဆီယမ် ၊ ပိုတက်ဆီယမ် ၊ ဖော့စဖိတ် အဟာရဓာတ်များစွာ ပါဝင်သော မြေဩဇာမူန့်ပါ။ ကြက်ဥခွံ = ၆ ခွံ ငှက်ပျောသီးခွံ = ၂ ခွံ မီးအပူပေးပါ အမှုန့်ကြိတ်ပြီး အပင်တစ်ပင်အတွက် လ္ဖက်စားဇွန်း ၂ ဇွန်း နှုန်းဖြင့် သီးနှံစုံအတွက် အပင်ခြေရင်း ပတ်လည်ထည့်ပေးနိုင်ပါသည်။ အပင်တစ်ပင်ကိုိ ကြက်ဥခွံ ၁ ခွံ ငှက်ပျောသီးခွံ ၁ ခွံ အသုံးပြုလျှင် တစ်ရာသီအတွက် လုံလောက်ပါတယ်။ စိုိက်ပျိုးရေး နည်းပညာ Unicode အပငျမြိုးမြိုးအတှကျ လိုအပျတဲ့ သဘာဝ မွသွေဇာမှုနျ့ အလှယျတဈကူ ပွုလုပျနညျး ကယျလျဆီယမျ ၊ ပိုတကျဆီယမျ ၊ … Read more
တစ်လမ်းမောင်း ၈၁၊၈၂၊၈၃ နှင့်၈၄ လမ်းတွေကို Two Way အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးမည်
တစ်လမ်းမောင်း လမ်းများ နှစ်လမ်းမောင်းလမ်းများသို့ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပါမည် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်ထဲက One Way ဖြစ်တဲ့ ၈၁၊၈၂၊၈၃ နှင့်၈၄ လမ်းတွေကို Two Way အဖြစ်(၉.၅.၂၀၂၀ )ရက်နေ့မှစတင်၍ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ထဲက One Way ဖြစ်တဲ့ ၃၆၊၃၇၊၃၉ နှင့်လမ်း ၄၀ တို့ကိုလည်း Two Way လမ်းများအဖြစ် (မကြာမီကာလတစ်ခုအတွင်း)ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်-မြောက်လမ်းများဖြစ်ကြတဲ့ ၈၁၊၈၂၊၈၃နှင့်၈၄ လမ်းများကို အဓိကယာဉ်‌ကြောလမ်းများ အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တာမို့ အရှေ့-‌အနောက်လမ်းများဖြစ်တဲ့ ၂၇လမ်းမှ ၃၄ လမ်းများကလာတဲ့ယာဉ်များက(တောင်-မြောက်လမ်း)မှလာတဲ့ယာဉ်များကိုဦးစားပေး၍မောင်းနှင်‌ပေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပြီးတဲ့ နောက်မှာ ယာဉ်စည်းကမ်း၊လမ်းစည်းကမ်းအတိုင်းမှန်ကန်စွာလိုက်နာမောင်းနှင်ကြဖို့ (၉.၅.၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၅.၅.၂၀၂၀ ရက်နေ့)အထိ ပညာပေးကာလအဖြစ်သတ်မှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် (၁၆.၅.၂၀၂၀ )ရက်နေ့မှစတင်၍ အဲ့ဒီလမ်းများပေါ်တွင်ရှိတဲ့ ကားရပ်ရန် (Parking) သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ မျဉ်းဝါအမှတ်အသားအတွင်းမှာသာ မော်တော်ယာဉ်များစနစ်တကျရပ်နား‌သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တဆက်တည်းပဲလမ်းကျူးဈေးသည်များ၊လမ်းကျူးအရောင်းဆိုင်များနှင့်ယာဉ်စည်းကမ်း၊လမ်းစည်းကမ်းအတိုင်းမလိုက်နာတဲ့ … Read more
တရုတ်နယ်စပ်က ရင်နင့်ဖွယ် အဖြစ်အပျက်
ယုတ်မာလွန်းအားကြီးတဲ့တရုတ် မြန်မာကတင်ပျို့တဲ့ သစ်သီးဝလံတွေကို တရုတ်က အဝယ်ရပ်ပစ်လိုက်လို့ ကုန်ကားတွေဟာ ပါလာသမျှ အသီးအနှံတွေ စွန့်ပစ်နေကြရတာမြင်တော့အတော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ တရုတ်နဲ့ ကုန်သွယ်မှုမှာ တောင်သူတွေ၊ ကုန်သည်တွေ ခံနေရတာ ခဏခဏ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်နှစ်က ( ၂၀၁၇ ကထင်တယ်) အိန္ဒိယက မတ်ပဲတွေ အဝယ်ရပ်ပစ်လိုက်လို့ မြန်မာတောင်သူတွေ၊ ကုန်သည်တွေအတော် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတာ မှတ်မိနေသေးတယ်။ တချို့ကုန်သည်တွေဆို ခွက်ခွက်လန်အောင် ရှုံးပြီး ရုတ်တရက် လူမွဲဘဝ ရောက်ကြရတယ်။ ဒီလိုတွေမဖြစ်ရလေအောင် အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဟာ နှစ်နိုင်ငံကြားညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာတွေ၊ MOU ချုပ်ဆိုတာတွေ လုပ်ရတယ်။ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုစရိတ်နဲ့ သီးနှံဈေးနှုံး မကိုက်လို့ အရှုံးပေါ်၊ အကြွေးတွေပိ၊ အကြွေးဆပ်ဖို့ လယ်တွေယာတွေကို တရုတ်တွေလက်ထဲ ထိုးရောင်းရနဲ့ တောင်သူတွေဘဝ အသက်ရှုမဝဖြစ်လာကြရပြီ။ စပါးတင်းတစ်ရာကို အနည်းဆုံး ၅သိန်းနဲ့ အစိုးရက … Read more
← Previous Page1 … Page276 Page277 Page278 … Page293 Next →